25 Badbaadada Lacagta ugu Badan ee NFL | Dawladaha Ugu Fiican | Ganacsiyada %
Bogga ugu weyn 15 Badbaadada Lacagta Ugu Sarreysa ee NFL | Gobolka ugu Fiican
Isha sawirka: sportsrush.com
Nabadgelyadu waa mid ka mid ah boosaska ugu muhiimsan kubbadda cagta maxaa yeelay waxay hubisaa in dembigu uusan sameynin ciyaaro waaweyn oo qarxa.
Iyada oo qayb ka ah xirfaddooda, badbaado waa inay daboolaan kuwa qaata godadka oo ay si dhakhso leh ugu filan yihiin inay dib u qabsadaan orodka duurka. Badbaadadu waxay leeyihiin tirada ugu badan iyo xoogga kuwa dib -u -safka, laakiin deg -deggooda iyo xawligoodu waxay ka dhigaan inay ku qaldaan dib -u -jeedinta geeska. Waa meel isku -dhafan oo run ah oo laga yaabo in la geeyo xaalado difaac oo kala duwan.
Sidaas oo kale, amniga ugu mushaharka badan wuxuu kasbadaa $ 15 milyan sanadkii.
Maqaalkani wuxuu soo bandhigi doonaa 15 nabadgelyo ee ugu mushaarka badan NFL, iyo sidoo kale waajibaadkooda iyo mushaharkooda, iyo sidoo kale su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan jagada.
Nabadgelyadu ma tahay meel nabdoon kubbadda cagta?
Nabadgelyadu waa meel lama huraan ah oo dabacsanaan ku leh garoonka kubadda cagta oo uu sameeyo xubin ka tirsan difaaca. Waa mid ka mid ah boosaska muhiimka ah ee difaaca, maadaama ay gacan ka geysaneyso joojinta orodka iyo gudbinta labadaba.
Badbaadada, oo sidoo kale loo yaqaanno daafacyada difaaca, ayaa ah safka ugu dambeeya ee difaaca, oo saf ilaa toban illaa shan iyo toban yaardi ka dambeeya xarriiqda qallafsan oo ka ciyaaraya qayb muhiim ah difaaca difaaca, sidaa darteed waa ammaan.
Doorka badbaadada kubbadda cagta
Nabadgelyada, sida magacu tilmaamayo, waa safka ugu dambeeya ee difaaca. Doorka nabadgelyadu waa in la hubiyo in ciyaartooyda weerarka ahi aysan goolal dhalin iyagoo ordaya ama qabanaya kubadda. Dhinaca difaaca ee kubadda, waa ciyaaryahanka ugu qoto dheer.
Waa kuwan qaar ka mid ah doorarka badbaadada:
Adigoo xubin ka ah difaaca, mas'uuliyadda koowaad ee nabadgelyadu waa in laga hortago in dembigu dhaliyo dhammaan kharashyada.
Wuxuu u baahan yahay inuu ku kaalmeeyo taageerada orodka, nabadgelyadu waxay u adeegi doontaa sidii safka afraad ee taageerada orodka ee xaaladaha orodka muuqda.
Waxa uu u baahan yahay inuu joojiyo riwaayadaha waaweyn ee baasaska, yoolka asaasiga ah ee badbaadada ciyaarta baasku waa inuu kubbadda hor dhigo.
Waa maxay celceliska mushaharka badbaadada NFL?
Marka laga soo tago booska, waxaa jira dhowr qodob oo dheeri ah oo saameeya magdhowga NFL. Qaarkood waa xirfado, celcelis horyaal, gunno saxeex, dabool mushahar, iyo celcelis mushahar.
Quarterbacks -ka iyo wax ka qabashada difaaca ayaa loo malaynayaa inay kasbadaan lacagta ugu badan, waxaa ku xiga daba -ordayaasha iyo kuwa dib -u -safka, ugu dambayn, badbaado iyo cidhiidhi adag.
Sida laga soo xigtay Ururka Ciyaartoyda NFL, ciyaartoy ku jira liiska firfircoon wuxuu kasbadaa mushaharka ugu yar ee saldhigga ah USD 400,000 ilaa USD 435,000. Ciyaartoyda, lacagtaan waa loo dammaanad qaaday. Waxay kaloo helaan gunno iyo mudnaan dhammaadka xilli kasta.
Khibrad dheeri ah, magdhowgu wuu kordhaa sanad walba. Mushahar celcelis ahaan USD 700,000 ilaa USD 750,000 ayaa la kasban lahaa nus-toban sano oo khibrad ah.
Adigoo leh toban sano oo khibrad ah, waxaad kasban kartaa ilaa USD 990,000.
Sidee nabadgelyada looga ciyaaraa kubadda cagta?
Ciyaarta kubbadda cagta, waxaa jira laba boos oo “badbaado” ah xagga difaaca. Xilalkooda ayaa laga yaabaa inay marmar is -dhaafaan, in kasta oo inta badan loo xilsaaro kaalmo gebi ahaanba ka duwan difaaca.
Difaacyada difaaca ayaa ah koox boos weyn oo ay ku jiraan (DB). Nabadgelyo xoog leh (SS) iyo nabadgelyo lacag la'aan ah (FS) ayaa ah jagooyinka ammaanka.
Badbaadada badiyaa waxay saf u jirtaa 10-15 yaadh oo ka dambaysa xarriiqda xoqidda, mas'uuliyadooduhuna way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran nidaamka difaaca.
Guud ahaan, nabadgelyo xooggan ayaa si fiican loogu habeeyey ciyaarta orodka. Isagu waa dib -u -celiye leh xawaare nabdoon oo ay tahay inuu daboolo kuwa qaata isagoo weli xoog ku leh ciyaarta orodka.
Nabadgelyo xoog leh ayaa sida caadiga ah laga helaa meel u dhow badhtamaha beerta, dhinaca xooggan ee dhismaha.
Difaacyadan ayaa caadiyan joogaya meel u dhow xarriiqda wax -ka -qabadka waxayna gacan ka geystaan ​​joojinta orodka iyo ilaalinta dhamaadka cidhiidhiga ah ee riwaayadaha.
Nabadgelyo Bilaash ah
Dhinaca kale, badbaadada xorta ah waa safka ugu dambeeya ee difaaca garoonka kubbadda cagta. Isagu waa difaac-ku-jihaysan oo doorkiisu yahay inuu dib u fadhiisto, sahan sameeyo, oo weeraro marka loo baahdo.
Si kastaba ha noqotee, marka la fiiriyo khaladaadka dambiyada qaarkood, dhab ahaantii waxaa looga baahan doonaa inuu buuxiyo riwaayadaha orodka, maadaama uu inta badan yahay kan kaliya ee aan la xannibin.
Sababtoo ah booskooda garoonka dhexdiisa, badbaadada ayaa si weyn u saamayn karta natiijada cayaaraha.
25 Ammaanka ugu mushaarka badan NFL
Kuwani waa Badbaadada Lacagta Ugu Sarreysa ee NFL;
1. Justin Simmons (da: 27 jir) pos: FS
Denver Broncos waxay u saxiixday Justin Simmons afar sano, qandaraas dhan $ 61 milyan oo ay ku jirto $ 15 milyan oo gunno saxiix ah, $ 35 milyan oo lacag dammaanad ah, iyo celcelis mushahar sanadle ah $ 15,250,000.
Simmons waxaa la siin doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 2 milyan iyo gunno saxiix ah oo ah $ 15 milyan sannadka 2021.
2. Budda Baker (da: 25) pos: S
Budda Baker wuxuu la saxiixday afar sano, $ 59 milyan qandaraas uu la galay Cardinals Arizona, oo ay ku jirto $ 10 milyan oo gunno saxiix ah, $ 33,100,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 14,750,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Baker wuxuu heli doonaa $ 4,000,000 mushaarka saldhigga ah iyo $ 7,100,000 gunnada saxiixa 2021.
3. Eddie Jackson (da'da: 28) pos: FS
Eddie Jackson wuxuu ogolaaday heshiis afar sano ah, $ 58,400,000 oo uu la galay Chicago Bears. Tan waxaa ka mid ah $ 12 milyan oo gunno saxeex ah, $ 33 milyan oo lacag dammaanad ah, iyo $ 14,600,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Jackson wuxuu kasban doonaa $ 990,000 mushaharka aasaasiga ah, $ 7,960,000 gunnada dib -u -habeynta, iyo $ 100,000 gunnada tababarka 2021.
4. Kevin Byard (da'da: 27) pos: FS
Kevin Byard wuxuu saxiixay heshiis shan sano ah, $ 70 milyan oo uu la galay Tennessee Titans. Tan waxaa ku jira $ 9 milyan oo gunno saxeex ah, $ 31 milyan oo lacag dammaanad ah, iyo $ 14 milyan celcelis mushahar sannadeed.
Byard waxaa la siin doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 11,200,000 sanadka 2021 iyo gunno qoraaleed ah $ 500,000.
5. Tyrann, Mathieu (da: 29) pos: FS
Tyrann Mathieu wuxuu oggolaaday heshiis saddex sano ah, $ 42 milyan oo uu la galay Taliyayaasha Magaalada Kansas, oo ay ku jirto $ 14,800,000 oo ah gunno saxeex, $ 26,800,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 14 milyan celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Mathieu wuxuu kasban doonaa $ 14,550,000 mushaharka aasaasiga ah iyo $ 250,000 gunnada tababarka 2021.
6. Landon Collins (da: 27 jir) pos: SS
Landon Collins wuxuu ogolaaday heshiis lix sano ah oo ah $ 84 milyan oo uu la galay Washington Redskins. Tan waxaa ku jira $ 15 milyan oo gunno saxeex ah, $ 44,500,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 14 milyan celcelis mushahar sannadeed.
Collins wuxuu heli doonaa $ 12,500,000 mushaarka saldhigga ah iyo $ 205,877 gunnada qorista ee 2021.
7. Devin McCourty (da: 33) pos: FS
The New England Patriots waxay Devin McCourty u saxeexday laba sano, $ 23 milyan oo qandaraas ah oo ay kujirtay $ 10,750,000 gunno saxeex, $ 17 milyan oo dammaanad ah, iyo celcelis mushahar sanadle ah $ 11,500,000.
McCourty wuxuu heli doonaa $ 8 milyan oo ah mushaharka aasaasiga ah iyo $ 1 milyan oo gunno roster ah 2021.
8. John Johnson (da: 25) jir: SS
Cleveland Browns waxay John Johnson u saxeexday heshiis saddex sano ah, oo ah $ 33,750,000. Tan waxaa ku jira $ 12 milyan oo gunno saxeex ah, $ 24 milyan oo lacag dammaanad ah, iyo celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah ee $ 11,250,000.
Johnson waxaa la siin doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 1,250,000 sannadka 2021 -ka, iyo sidoo kale gunno saxiix ah oo ah $ 12 milyan.
9. Marcus Maye (da'da: 27) pos: FS
Marcus Maye waxa uu New York Jets u saxiixay qandaraas hal sano ah oo qiimihiisu yahay $ 10,612,000, iyada oo la damaanad qaaday $ 10,612,000, iyo celcelis ahaan $ 10,612,000.
Maye wuxuu heli doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 10,612,000 sanadka 2021.
10. Marcus Williams (da 'ahaan: 24) pos: FS
Marcus Williams wuxuu oggolaaday heshiis hal sano ah oo qiimihiisu yahay $ 10,612,000 oo uu la galay New Orleans Saints, iyada oo la damaanad qaaday $ 10,612,000 iyo $ 10,612,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah. Williams waxaa la siin doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 10,612,000 sanadka 2021.
11. Harrison Smith (da'da: 32) pos: SS
Vikings-ka Minnesota waxay Harrison Smith u saxiixeen heshiis shan sano ah, oo ah $ 51,250,000. Tan waxaa ku jira $ 10 milyan oo gunno saxiix ah, $ 28,578,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 10,250,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Sannadka 2021, Smith wuxuu kasban doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 9,850,000 iyo gunno tababar $ 400,000.
12. Jordan Poyer (da: 30) pos: SS
Jordan Poyer wuxuu oggolaaday heshiis laba sano ah, $ 19,500,000 oo uu la galay Buffalo Biilasha, oo ay ku jirtay $ 3 milyan oo gunno saxiix ah, $ 13,300,000 oo dammaanad ah, iyo $ 9,750,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Poyer wuxuu samayn doonaa $ 6,275,000 oo ah mushaharka aasaasiga ah, $ 400,000 gunno roster ah, iyo $ 200,000 gunno tababar 2021.
13. Micah Hyde (da: 30) pos: SS
Micah Hyde wuxuu oggolaaday heshiis laba sano ah, $ 19,250,000 oo uu la galay Buffalo Biilasha, oo ay ku jirtay $ 7,500,000 gunno saxeex, $ 13,300,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 9,625,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Hyde wuxuu heli doonaa $ 2,100,000 oo ah mushaharka aasaasiga ah, $ 7,500,000 ee saxiixa gunnada, $ 264,706 ee gunnada qorista, iyo $ 100,000 gunnada tababarka 2021.
14. Jimmie Ward (da 'ahaan: 30) pos: FS
San Francisco 49ers waxay Jimmie Ward u saxeexday saddex sano, $ 28,500,000 oo qandaraas ah oo ay kujirtay $ 8,000,000 gunno saxeex, $ 16,500,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 9,500,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah. Ward wuxuu heli doonaa $ 8,400,000 oo ah mushaharka asaasiga ah, $ 411,754 gunno qoris, iyo $ 100,000 gunnada tababarka 2021.
15. Adrian Amos (da 'ahaan: 28) pos: FS
Adrian Amos wuxuu heshiis afar sano ah, $ 36 milyan la saxiixday Green Bay Packers, oo ay kujirto $ 11 milyan oo gunno saxeex ah, $ 12 milyan oo dammaanad ah, iyo $ 9 milyan celcelis mushahar sanadle ah.
Amos wuxuu kasban doonaa $ 990,000 mushaharka aasaasiga ah, $ 400,000 gunno roster ah, $ 2,664,000 oo ah gunno dib -u -habeyn, iyo $ 5000 gunnada tababarka 2021.
Halkaan waxaa ah nabadgelyo kale oo ugu mushaarka badan NFL
16. Rayshawn Jenkins (da: 27) pos: S
Rayshawn Jenkins wuxuu u saxiixay Jacksonville Jaguars heshiis afar sano ah, $ 35 milyan, oo ay kujirto $ 8 milyan oo gunno saxeex ah, $ 16 milyan oo dammaanad ah, iyo $ 8,750,000 celcelis ahaan mushaharka sanadlaha ah.
Jenkins waxaa la siin doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 1,000,000 sannadka 2021, iyo sidoo kale $ 8,000,000 oo ah gunno saxiix, gunno qoris ah oo ah $ 468,750, iyo gunno tababar oo ah $ 500,000.
17. Malcolm Jenkins (da: 33) pos: FS
Malcolm Jenkins wuxuu la saxiixday New Orleans Saints heshiis afar sano ah, $ 32 milyan, oo ay ku jirto $ 9 milyan oo gunno saxiix ah, $ 16,250,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 8 milyan oo celcelis ahaan mushahar sanadeed ah.
Jenkins waxay samayn doontaa $ 1,100,000 oo ah mushaarka saldhigga ah iyo $ 5,100,000 oo ah gunno dib -u -habeyn ah 2021.
Akhri: Waa Maxay Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2021
18. Quandre Diggs (da: 28) pos: FS
Libaaxyada Detroit ayaa Quandre Diggs u saxiixay heshiis saddex sano ah, $ 18,600,000 oo qandaraas ah oo ay ku jirto $ 4,500,000 oo ah gunno saxiix, $ 9,557,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 6,200,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Sannadka 2021, Diggs wuxuu kasban doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 5,950,000, gunno qoris ah $ 100,000, iyo gunno tababar oo ah $ 100,000.
19. Eric Murray (da: 27) jir: SS
Houston Texans waxay Eric Murray u saxeexday heshiis saddex sano ah, $ 18 milyan oo qandaraas ah oo ay ku jirto $ 4,500,000 oo ah gunno saxeex, $ 10,750,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 6 milyan oo celcelis ahaan mushahar sannadeed ah.
Murray wuxuu samayn doonaa $ 5,000,000 oo ah mushaharka asaasiga ah, $ 218,750 oo ah gunnada qorista, iyo $ 750,000 oo ah gunno dhiirrigelin ah 2021.
20. Jalen Mills (da'da: 27) pos: S
Jalen Mills ayaa heshiis afar sano ah, $ 24 milyan la saxiixday New England Patriots, oo ay ku jirto $ 2,500,000 gunno saxiix ah, $ 9 milyan oo dammaanad ah, iyo $ 6 milyan oo celcelis ahaan mushahar ah.
Mills waxay samayn doontaa $ 3,000,000 oo ah mushaharka aasaasiga ah, $ 2,500,000 ee saxiixa gunnada, iyo $ 882,353 oo ah gunnada qorista ee 2021.
21. Vonn Bell (da'da: 26) pos: FS
Vonn Bell wuxuu oggolaaday heshiis saddex sano ah, $ 18 milyan ah oo uu la galay Cincinnati Bengals, oo ay ku jirtay $ 3 milyan oo gunno saxeex ah, $ 3 milyan oo dammaanad ah, iyo $ 6 milyan celcelis mushahar sanadle ah.
Bell wuxuu heli doonaa $ 4,100,000 oo ah mushaharka aasaasiga ah, $ 200,000 oo ah gunnada qorista, iyo $ 200,000 gunnada tababarka 2021.
22. Jamal Adams (da: 25) pos: SS
Diyaaradaha New York ayaa u saxiixay Jamaal Adams heshiis afar sano ah, $ 22,258,738 oo ay ku jirto $ 14,328,154 gunno saxiix ah, $ 22,258,738 oo dammaanad ah, iyo sidoo kale $ 5,564,685 oo lagu qiyaasay mushahar sannadeedka.
Sannadka 2021, Adams wuxuu kasban doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 9,860,000.
23. Eric Rowe (da: 28) pos: SS
Miami Dolphins waxay Eric Rowe u saxeexday heshiis saddex sano ah, $ 16,150,000 oo qandaraas ah oo ay kujirtay $ 2,100,000 oo ah gunno saxeex, $ 6,575,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo celcelis mushahar sanadle ah $ 5,383,333. Rowe wuxuu samayn doonaa $ 3,500,000 oo ah mushaharka asaasiga ah, $ 2,000,000 oo ah gunnada qorista, iyo $ 25,000 gunnada tababarka 2021.
Akhri: Yey Yihiin Kuwa Mushaharka Ugu Badan Bixiya 2021? | Ciyaaraha Ugu Fiican
24. Chuck Clark (da: 26) pos: SS
Chuck Clark wuxuu oggolaaday heshiis saddex sano ah, $ 15,300,000 ah oo uu la galay Baltimore Ravens, oo ay ku jirtay $ 5,500,000 gunno saxiix ah, $ 10,000,000 oo ah lacag dammaanad ah, iyo $ 5,100,000 celcelis ahaan mushaharka sannadlaha ah.
Clark wuxuu heli doonaa mushahar aasaasi ah oo ah $ 2,500,000 sanadka 2021.
25. Kareem Jackson (da: 33) pos: SS
Kareem Jackson ayaa ogolaaday heshiis hal sano ah, oo ah 5 milyan oo doolar oo uu la galay Denver Broncos, iyada oo la dammaanad qaaday $ 4,750,000 iyo celcelis ahaan $ 5 milyan oo mushahar sanadle ah. Jackson wuxuu kasban doonaa $ 4,750,000 mushaharka aasaasiga ah iyo $ 250k gunno qoris ah 2021.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Badbaadada Lacagta ugu Sareysa ee NFL
Ma la doorbidayaa in la ciyaaro gees -gees ama badbaado?
Kooxdu waxay hawlgalin kartaa Nabadgelyo Xoog leh oo ka dhaqso badan kana dhaqso badan, sida Cornerback, oo ka soo horjeeda dembiga gudbinta. Koox ayaa laga yaabaa inay geyso gees -gees dheeraad ah halkii ay ka ahaan lahayd Badbaado Xoog leh oo ka dhan ah weerar lala galo qaatayaal badan. Badbaadada Bilaashka ah waa ciyaaryahanka ka fog kubadda.
Kubadda cagta, maxaa loogu yeeraa ammaan?
Kooxda ayaa laga yaabaa inay hoos u dhigto kubbadda aaggeeda dhammaadkeeda halkii ay halis ugu jiri lahayd fumble ama inay ka fiirsato aagga dhammaadka oo ay halis u gasho punt la xiray. Kubbadda ayaa markaa loo wareejin doonaa xarriiqda 25-yaard, halkaas oo laga taagi doono. Waxaa loogu magac daray badbaado tan iyo markii loo malaynayay inay tahay hab aan khatar lahayn.
Nabadgelyo ka dib, maxaa xigi doona?
Badbaadada ka dib, kooxda la ansixiyay waa inay kubbada ku ciyaaraan laad xor ah (punt, dropkick, ama placekick) oo ka soo laadkeeda 20-yaardi.
Waa maxay qiimaha ammaanku marka la eego qodobbada?
Laba dhibcood ayaa lagu abaalmariyay badbaadada lagu guulaystay.
Taabashadu ma ka fiican tahay badbaado?
Xitaa haddii nabadgelyadu kubbada dib kuu soo celiso, weli qiima uma laha sida taabashada. Wadista caadiga ah waxay qiimaysaa 2.1 dhibcood taas oo macnaheedu yahay nabadgelyadu waxay u dhigantaa qiyaastii afar dhibcood celcelis ahaan. Nabadgelyadu wali waxay qiimihiisu ku dhowdahay saddex dhibcood wax ka yar taabashada ka dib wadista-amniga kadib.
NFL dhexdeeda, intee in le'eg bay ammaanku ku badan yihiin?
Nabadgelyadu waa habka ugu yar ee gooldhalinta kubbadda cagta Mareykanka, in kasta oo aysan ahayn dhacdooyin aan caadi ahayn - badbaado ayaa dhacday mar kasta 14.31 kulan oo ka tirsan Horyaalka Kubadda Cagta Qaranka (NFL) tan iyo 1932, ama ku dhawaad ​​hal mar toddobaadkii iyadoo la raacayo xeerarka jadwalka hadda jira.
Badbaadada kubbadda cagtu waxay isku daraan xawaaraha geeska ee caadiga ah iyo xirfadaha daboolidda awoodda, aragtida, iyo wax ka qabashada awoodaha saf -dhaqameedka si ay u abuuraan isku -dhafnaan gaar ah.
Natiijo ahaan, badbaado waaweyni ma muuqato maalin kasta.
Haddii aad rabto inaad noqoto badbaado weyn kubbadda cagta, waa inaad si adag u tababbarto si aad u hagaajiso xooggaaga, xawaaraha, fahamka dembiyada, iyo kartida wax ka qabashada.
Kuwani waa Badbaadada Lacagta ugu Badan ee NFL.
15 DJs ee ugu mushaarka badan Dunida
Wax kasta oo mudan in la sameeyo, ayaa mudan in si fiican loo sameeyo, xitaa waxyaabo yaryar sida korinta eeyaha. Oo waa inaad samaysaa…
Dadka intooda badani waxay aaminsan yihiin in shaqo kasta oo qofku samayn karo lacag degdeg ah ay tahay inay noqoto shaqo walaac leh. Xaqiiqda…